वि.संं २०२० फागुन २० गते शुक्रबार राजा महेन्द्र रारा ताल पुगेका थिए । भनिन्छ, त्यतिबेला रारा पुग्ने राजा महेन्द्र नै पहिलो विशिष्ट व्यक्ति थिए । केवल त्यहीँ वरपरकाले देखेको रारा यति सुन्दर छ भन्ने रारा गाँउ बाहिरका कमैलाई मात्र थाहा थियो । रारा देखेर राजा महेन्द्र यति मन्त्रमुग्ध भए कि त्यहीँ ताल किनारमा रहेको धुपीको चौतारामा बसेर कविता कोरेः
रारा नजिकै ढुङ्गामा कोरिएको राजा महेन्द्रको कविता ।
रारा क्षेत्रलाई यसरी नै सुन्दर रहिरहन दिनुपर्छ भन्ने सोँचमा राजा महेन्द्रको ध्यान गयो । त्यसबेला पञ्चायतकाल थियो, राजाले बोलिदिए पछि त्यसलाई पूर्ण गर्न पञ्चहरुको दौडधुप शुरु हुने नै भयो । रारा क्षेत्रको बस्तीले राराको सुन्दरता नष्ट हुन सक्ने आँकलन गरेर रारालाई बस्तीरहित बनाउनुपर्ने निधो भयो । सुरूका दिनमा ताललाई रारा दहले परिचित उक्त तालको नाम ०२० सालपछि महेन्द्र तालका नाममा चिनिन थाल्यो ।
राजा पुग्नु केहिको लागी खुशीको कुरा थियो । केहि राजाका कविताले रमाए तर केहीको लागि भने राजाको यो आगमन अभिशाप भएर आयो । राजाको त्यो भ्रमण सम्झनै मन नलाग्ने कथा भएर आयो ।
यो पनि पढ्नुहोस् तानाशाह हिटलरले जुद्धशमशेरलाई दिएको ऐतिहासिक मोटर
तालनजिकै तीन बस्तीहरु मुर्मा, रारा र छाप्रु थिए । यी बस्तीमा रारा र छाप्रुमा मात्र करिब २३२ घरधुरी थिए । ती २३२ घरधुरीमा करिब १५०० को संख्यामा बसोबास थियो । अब बस्ती कसरी हटाउने भन्ने विषयमा निकै छलफल भयो । सैपाल हिमालको काखमा रहेको पहाडी भू-भागमा कोणधारी जंगलले भरिएको यो रमणीय ठाँउमा विभिन्न चराचुरुङ्गीको जलक्रिडास्थल पनि भएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनु पर्ने कुरा भयो । ०२८ माघ १७ गते राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भएपछि रारालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने योजना केही वर्षलाई रोकियो । अन्ततः ०३२ सालमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको गठन गरियो ।
वि.संं २०३२ माघ ताका, रारा गाउँमा खेल्दै गरेका बालक ।
करिब १०६ वर्ग किमी ओगटेको रारा रा.नि. मा तालको भूभाग मात्र करिब ११ (१०.८) वर्ग किमी छ । साथमा तालको उत्तर पश्चिममा रहेको छाप्रु बस्ती, दक्षिण पश्चिममा रहेको मुर्मा बस्ती तथा दक्षिण पूर्वमा रहेको रारा बस्ती पनि समेटिएको थियो । ०३५ सालमा छाप्रु तथा राराको बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने निधो भयो । ती जनताहरुको लागी बाँके बर्दियाको बीच जंगलको भूभाग छुट्याइयो । उच्च पहाडी भूभागमा बसोबास गर्नेहरुको लागी तराईको उखरमाउलो गर्मीको बस्ती रोजियो । त्यो बेला पञ्चायतकालको उर्दीमा अस्वीकार गर्ने वा विरोध गर्न सक्ने कसैको आँट नै हुदैँनथ्यो । केहीले त्यति टाढा तराईमा जानुभन्दा नजिकै कतै ठाँउ दिए हुन्थ्यो भन्ने विचारसम्म गरे । तर ती विचार राराको पानीको आवाजले बिलाएझैं भयो ।
वि.सं. २०२५ बैशाख ताका रारा गाउँबाट तालतर्फ हेर्दा ।
करिब ४५ वर्ष अगाडिको त्यो दिन गाँउलेको लागि पीडादायक दिन भयो । सरकारी कर्मचारी घर घरका ढोका ढकढकाउदै सरकारी निर्णय सुनाउन आए, "बस्ती तुरुन्तै खाली गरि सरकारले दिएको तराईमा गएर बस्नु" यो अनुरोध थिएन्, आदेश थियो । अति मन बिझाउने आदेश, मुटु भित्रसम्म बिझ्ने आदेश । सयौँ वर्षदेखी बाजेबराजु देखि बसिआएको थातथलो सधैँको लागि छोडेर जाने आदेशले मन कटक्क भए पनि छोड्न तयार भए रारा किनारका रैथानेहरू । वस्तुभाउ नजिकैको बस्तीमा गएर जति भेटे उतिमै बेचबिखन गरे । जे सकिन्छ बोकेर भारी कसे र तराई जान तयार भए / तयार गराइए ।
यो बस्तीको कथा उति नयाँ होइन र धेरै पुरानो पनि होइन् । पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानपछि राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा बहादुर शाहले राज्य विस्तारको क्रममा पश्चिम आक्रमण गर्न थाले । यहि क्रममा काजी शिवनारायण खत्री र सरदार प्रबल रानाको नेतृत्वमा वि.सं १८४६ को असोज १५ गते जुम्ला आक्रमण भएको थियो । बालक राजा चक्रसुदर्शन शाही भए पनि राज्यको रियासत उनका काका शोभन शाहीले गर्ने गरेका थिए । आक्रमणपछि बालक राजाको साथ काका शोभन शाही उत्तर हुम्लातर्फ भागे त्यहाँबाट तिब्बतमा शरण लिन पुगे । राजाले तिब्बतमा शरण लिन पुगे तर नातेदार तथा राज्यका केही जनताहरु जो गोर्खा राज्यको दमनबाट मुक्त हुन उत्तरतर्फ लागेका थिए । तिनै जुम्लेलीहरु नै राराको वरपर मुर्मा, रारा र छाप्रुमा बसेका थिए । यहाँ रहेका शाहीहरु राजाका नातेदारहरु थिए भने अन्य जुम्ला राज्यका जनताहरु थिए । यसरी झण्डै २०० वर्ष देखि बस्ती बसाएर बसेका त्यहाँका जनता एउटै आदेशले बेघर हुन पुगे ।
नयाँ ठाँउमा निकै आश्वासन दिइएको थियो । प्रति परिवार ३४ कट्ठा जमिन तथा बस्नलाई घर पनि बनाइदिने आश्वासन दिइएको थियो । आफ्ना जायजेथा माया मारेर घरको मूलढोकामा बलियो ताला लगाएर उनीहरू नयाँ ठाउँमा पुगेका थिए । यिनीहरुको सोचाइमा सरकारले एकदिन फेरी यहि ठाँउ फर्कन दिनेछन् भन्ने मनमा आशा लिएर निस्केका थिए । करिब १५ दिन हिँडेर सो नयाँ ठाँउमा पुग्दा बस्ने घरको कुरा त टाढै थियो व्यवस्थित बसोबासको लागि पनि कुनै प्रबन्ध मिलाइएको थिएन् । सबैभन्दा समस्या त त्यहि नजिकै बस्ने पुरानो बस्तीका मानिसहरुबाट झेल्न पुगेका थिए । आफ्नो सम्पूर्ण सम्पति त्यागेर सुकुम्बासी झैँ नयाँ बस्तीमा आएकाको समस्यालाई बुझेर सरकारले त्यहाँ पहिलेदेखि बसेका ३८ घरधुरीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गराइएपछि बल्ल यी राराबासीलाई केही सन्तोष भयो ।
४३ वर्ष बित्न लाग्दा रारा वरपर नयाँ बस्तीको शुरुवात भएको र होटलहरु खोल्न दिएको तर आफूहरुलाई फर्कन नदिँदा ती रारा गाउँबासीहरुको मनमा पक्कै पनि अति दुःख लागेको हुनुपर्छ । अहिले रारा ताल घुम्न पुग्नेहरु राराको सौन्दर्यले मन्त्रमुग्ध त हुन्छन् । तर राराको सुन्दरता बचाउन धपाइएकाहरुको पीडाको अनूभूति कसैले पनि गर्न खोज्दैनन् । त्यहाँ अझैपनि पुराना मन्दिरहरु तथा ढुङ्गेधाराहरु संरक्षणको पर्खाइमा छ । मुटूमाथि ढुङ्गा राखेर बस्ती छोडेर गएकाहरुको पुस्ता विस्तारै सकिँदै जाँदा पीडा पोख्नेहरु हराउँदै गए । नयाँ पुस्ता नयाँ ठाँउमा रमाइसकेका छन् ।
अनुप विक्रम शाहको "सुन्दर रारामा लोभीपापीको नजर"